Fanompoam-pivavahana – Page 2 – FJKM Ambavahadimitafo Fanompoam-pivavahana |
A la une.Fanompoam-pivavahana.Toriteny
Araraoty ny andro azo hanaovan-tsoa fa ratsy izao fiainana izao
Publié le 29 août 2021 à 05:08
Alahady 29 aogositra 2021, nitondran’ny mpitandrina Randrianarisoa Alain ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Lioka 6 : 27-36 : « 27Kanefa hoy Izaho aminareo izay mihaino: Tiava ny fahavalonareo; manaova soa amin’izay mankahala anareo; 28misaora izay manozona anareo, ary mivavaha ho an’izay manisy ratsy anareo. 29Raha misy mamely ny takolakao anankiray, dia atolory azy koa ny anankiray; ary raha
Mandinika ny fanoloran-tenan’ny mino i Jesoa
Publié le 23 août 2021 à 09:08
Ho aminareo anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompontsika. Alahady 22 aogositra 2021 nitondran’ny mpitandrina Razakamanantsoa Narinjaka ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Marka 12 : 41-44 : « 41Ary raha nipetraka tandrifin’ny fandatsahan-drakitra Jesosy, dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka tao; ary maro ny mpanankarena nandatsaka be tao. 42Fa nisy mpitondratena malahelo anankiray kosa tonga teo, ka nandatsaka
Ary ny zanany hahazo fialofana
Publié le 23 août 2021 à 08:08
Famindram-po sy fahamarinana ho an’izay manao asa tsara. Ny vavaky ny marina no mamonjy ain’olona. Ny fahatahorana an’i Jehovah no loharanon’aina Alahady 15 aogositra 2021, hitondrana am-bavaka ny asa Aumonerie nationale eo anivon’ny FJKM mbola andinihana ny lohahevitra hoe « Miorena @ asa tsara ». Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Ohabolana
Karakarao ny tanindrazana
Publié le 08 août 2021 à 04:08
Alahady 08 aogositra 2021 izay mbola hibanjinana ny lohahevitry ny FJKM hoe « Miorena @ asa tsara ». Ny mpitandrina Razakamanantsoa Narinjaka no nitondra ny hafatr’Andriamanitra araka ny Matio 21. Andeha hiombona @izany fotoana izany :
Miorena amin’ny asa tsara
Publié le 02 août 2021 à 08:08
Alahady 01 aogositra 2021, nanatanterahan’ny Tetik’asa Mendrika (Vokovoko manga) ny vokatra, ary handinihana amin’ity volana ity ny lohahevitra hoe « Miorena amin’ny asa tsara » izay nangalan’ny mpitandrina RANDRIANARISOA Alain ny hafatr’Andriamanitra. Andeha hiombona amin’izany fotoam-pivavahana izany :
Inty aho, iraho aho
Publié le 27 juillet 2021 à 01:07
« Masina, Masina! Masina Jehovah Tompon’ny maro, heniky ny Voninahiny ny tany rehetra » Alahady 25 Jolay 2021, alahady faha-8 manaraka ny Trinite hamaranana ny lohahevitra hoe « Miorena amin’ny antson’ny Tompo ». Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Isaia 6 : 8 « Inty aho, iraho aho » Andeha hiombona amin’ny fotoam-pivavahana :
Fanokanana Masera MAMRE FJKM Ambavahadimitafo 24 jolay 2021
Publié le 24 juillet 2021 à 01:07
Notokanana ho Masera MAMRE F.J.K.M. i : – RAFARAMALALA Christine – RAZAZAROHAVANA Pierrette – RAMILISOA Dina Raymonde Elisa – RANDRIANJANAHARY Minah Felaniony Teto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo ny asabotsy 24 jolay 2021 Araho ny fotoana tamin’izany :
Ho tompon-daka any amin’ny Fanjakan’Andriamanitra
Publié le 20 juillet 2021 à 09:07
Alahady 18 Jolay 2021, hiombonana @ sampana Fivondronana Laika manerana ny FJKM, hibanjinana amin’ity volana ity ny lohahevitra hoe « Miorena @ antson’ny Tompo« . Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Filipiana 3:12-16 : « 12Tsy toy ny efa nahazo sahady aho, na efa tanteraka sahady; fa miezaka aho hihazona izay nihazonan’i Kristy
Alahadin’ny STK – 11 jolay 2021
Publié le 11 juillet 2021 à 07:07
Alahady 11 Jolay 2021, alahadin’ny STK, nitondran’i Pasteur Misaina ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Jaona 10;1-10. Handeha hiombona amin’izany fanompoam-pivavahana izany :
Alahady fetim-bokatra 04 Jolay 2021
Publié le 05 juillet 2021 à 09:07
Tanteraka soa aman-tsara teto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo ny Fetim-bokatra 2021 niarahana tamin’ny Fiangonana manontolo sy ireo zanaka am-pielezana; fotoana lehibe eo amin’ny fiainan’ny fiangonana. Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Genesisy 12 ;1-9 : » dia hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary
Advento 2021 : Toriteny an-kira – Sekoly Taninketsa
Tafatoetra ny fon’izay miandry ny Tompo
Nahoana ny kristiana no tra-pahoriana
Alahadin’ny Fifohazana FJKM 2021
Alahadin’ny MAMRE FJKM 2021
Alahady 10 oktobra 2021 : Tafika masina
Hafatra avy amin’ny mpitandrina taorian’ny Tafika Masina oktobra 2021
Ary nony tonga ny fotoana, dia nipetraka hihinana Izy mbamin’ny Apostoly
Ataonareo va fa tonga hanome fihavanana ambonin’ny tany Aho?
Ny mino miorina ao amin’ny Tompo